San Htun's Diary: လမ်းလျှောက်ရင်း တွေးမိတာလေးတွေ
အိမ်မှာ တနေကုန် နေရတာ ခေါင်းတောင်ကိုက်လာလို့ညနေဆိုရင် ရာသီဥတု သာယာရင်၊ လမ်းလျှောက်ဖို့မပျင်းရင် စိတ်လိုလက်ရ လမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ဘေးတလျှောက် လမ်းလျှောက်ဖို့စက်ဘီးစီးဖို့လုပ်ထားတဲ့ လမ်းလေးအတိုင်း လမ်းလျှောက်တယ်။ အိပ်တန်းဝင်ဖို့ပြင်နေကြတဲ့ ငှက်သံလေးတွေ၊ နွေမှာ ဖူးပွင့်နေတဲ့ ပန်းရနံ့ တွေ၊ တသွင်သွင်စီးနေတဲ့ မြစ်ရေကို မြင်ရတိုင်း ဟိုင်းကြီးအိမ်နဲ့ဖေ၊မေတို့ ကို သတိရတယ်။ ဟိုင်းကြီးအိမ်ရှေ့ မှာလည်း မြစ်ရှိတော့ ဒီလမ်းလေးကိုလျှောက်ရတိုင်း မြစ်ရေကို မြင်ရတိုင်း ဟိုင်းကြီးအိမ်ကို သတိရတယ်နဲ့တူပါရဲ့ ။ မိုင်သောင်းချီဝေးတဲ့ ဟိုင်းကြီးကို စိတ်ထဲကနေ သွားလည်မိတယ်။ ဆွေမျိုးတွေနဲ့တွေ့ ပြီး စားချင်တာတွေ တဝတပြဲ နင်းကန်စားခဲ့တယ်။
လေယာဉ်ပျံ အီးပေါက်တာလို့ငယ်ငယ်က ထင်ခဲ့တယ့် မီးခိုးတန်းကို ကောင်းကင်မှာ မြင်ရတိုင်း အိမ်ပြန်ချင်မိပေမယ့် ပြန်ဖို.့ ကို စိတ် ကူးတောင် မယဉ်ရဲတဲ့ ဘဝ။ ဝင်ငွေမရှိ အိမ်ကပေးတယ့် ငွေကို ချွှေတာသုံး စားချင်တာကို ဝယ်မစားရဲ လက်ထဲ ပိုက်ဆံကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ပြီး ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရှာချိန် ပိုက်ဆံလိုမှာမို့ လား။ ဈေးဝယ်တိုင်း ဈေးအနည်းဆုံးကိုပဲ ရှာဖွေ ဝယ်ယူကြတဲ့ ကျောင်းသားဘဝ။ ကျောင်းတက်ချိန်မှာ စာမေးပွဲအောင်အောင် ကြိုးစားရ။ ကျောင်းပြီးသွားတော့လည်း အလုပ်မြန်မြန်ရအောင် ကြိုးစားရ။ ဘုရားကို ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်အောင် ရှိခိုး။ အလုပ်မြန်မြန်ရအောင် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ နတ်တွေပါ အကောင်းမနေရ နားပူနားဆာ လုပ်ပြီး ဆုတောင်းရတာ။ ဓိဌာန်တွေဝင်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘုရားတရား အမြဲဆုံး။ အဆင်ပြေချိန်မှာ ဘုရားတရားမေ့ပြီး ဒုက္ခရောက်မှပဲ ဘုရားတတော့တယ်။ အလုပ်ရတော့လည်း အလုပ်ထဲ အံခွင်ဝင်ကျဖြစ်အောင် ကြိုးစားရ။ တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက်ကြာရင် ခုထက် ပိုလစာကောင်းတဲ့ အလုပ်ရှာ။ ဘဝဆိုတာ ကြိုးစားနေရတာပဲ။ ကြိုးစားနေဖို.့ ပဲ လိုတာပါ။ မကြိုးစားတော့မှသာ တကယ်ဆုံးရှုံးသွားတာ။
စက်ဘီးစီးတဲ့သူတွေ မြင်ရရင် ငယ်ငယ်က စက်ဘီးစီးခဲ့တာကို သတိရတယ်။ တို့ မောင်နှမသုံးယောက်လုံးကို ဖေပဲ စက်ဘီးစီး သင်ပေးခဲ့ရတာ။ ညနေတိုင်း ရွာသစ်က လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဖေက နောက်က ပြေးလိုက်ပြီး ထိန်းပေးခဲ့တာ ဖေ့ခမျာ တော်တော်ပင်ပန်းရှာမှာပဲ။ ဂိုက်ကို ထိန်းနိုင်နေပေမယ့် ဖေ့စက်ဘီးက ကြီးနေတော့ လူနဲ့စက်ဘီးနဲ့မလိုက်ဖြစ်နေတာ။ ဖေ ပုသိမ်သွားခါနီး သမီး ဘာလိုချင်လဲလို့ မေးတော့ စက်ဘီးနဲ့လက်စွပ်လို့ ။ နောက်တော့ သမီးအတွက် စက်ဘီးဝယ်လာတယ် အိမ်ရှေ့ မှာ ဆိုလို့ဝမ်းသာလို့ထခုန်တာ ကြမ်းပြင်တောင် ကြိုးကျတယ်။ ဖေ မညာပါဘူး တကယ်လည်း စက်ဘီးနဲ့လက်စွပ် ဝယ်လာပေးပါတယ်။ အနီရောင် ဆိတ်ငါးကောင် စက်ဘီးလေးကို တညနေ စီးလိုက်ရရင်ပဲ စက်ဘီးစီးတတ်သွားတော့တယ်။ အရင်က စီးတတ်ပေမယ့် ဖေ့စက်ဘီးက ကြီးတော့ ဘီးမနိုင် ဖြစ်နေတာ။ မကြီးအတွက်ကတော့ ဖီးဆင့်စက်ဘီး အစိမ်းရောင်။ ပုသိမ်မှာ ကျောင်းတတ်တော့ မကြီးစက်ဘီးကို ဆက်စီးရတယ်။ မောင်မောင့်အတွက်ကတော့ ပြိုင်ဘီးလေးကို ရန်ကုန်မှာ ဝယ်ပေးတယ်။ တီဗီဂိမ်းအဆော့ကောင်းတာ ဆိုင်ရှေ့ မှာ ရပ်ထားတဲ့ စက်ဘီးကို ဘယ်အချိန်က မသွားမှန်း မသိလိုက်ဘူးလေ။ တော်သေးတယ် လူကိုတောင် မသွားရင် သိမှာ မဟုတ်ဘူး။ တီဗီဂိမ်းများ ကစားနေရလို့ ကတော့ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့။ တီဗီဂိမ်းပဲ စားနေတော့လို့ ။ စာကိုများ တီဗီဂိမ်းလို ကြိုးစားလို့ ကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ အဲလေ စက်ဘီးကနေ ဂိမ်းအကြောင်း ရောက်သွားပြီ။
ရန်ကုန်မှာတော့ စက်ဘီးစီးရတာ ခပ်ကြောက်ကြောက်။ ကားတွေကလည်း စက်ဘီးကို ဦးစားပေးတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဈေးသွားရုံ ၊ ရက်ကွက်ထဲ လျှောက်သွားရုံပါပဲ။ ပုသိမ်ကတော့ စက်ဘီးမြို့ တော်လို့ခေါ်ရအောင် တမြို့ လုံး စက်ဘီးတွေကြီးပဲ။ ကျူရှင်သွားတက်ရင် သူငယ်ချင်းတွေ စက်ဘီးကို ကပ်ပြီး ယှဉ်စီးခဲ့တာ။ အခုနေများ အဲလိုစီးဆို စီးဖို့ နေနေသာသာ ကြောက်လွန်းလို့ ။ ခုတော့လည်း ဆိုင်ကယ် တဝီဝီ ဖြစ်နေပြီ။
ရန်ကုန်မှာ ကြောက်လို့မစီးရဲပေမယ့် စင်ကာပူရောက်တော့ စက်ဘီးစီးချင် မိတယ်။ စက်ဘီးစီးဖို့လမ်းလေးတွေနဲ့ ။ clementi အိမ်နားမှာ jogging ပြေးလမ်းလေး ရှိတယ်။ ဘေးမှာ မြောင်းလေးနဲ. သစ်ပင်တွေနဲ့အတော့်ကို သာယာပါတယ်။ clementi နဲ့ jurong east ကြား mrt ဖြတ်သွားရင် တရုတ်ဘုရား ဆင်းတုတော်ဘေးနားက ပြေးလမ်းလေး။ mrt ပေါ်ကကြည့်ရင် မြင်ရတယ်။ စက်ဘီးစီးဖို့အတော်ကိုကောင်းတဲ့ နေရာလေး။ ခရေပန်းပင်တွေနဲ့မွှေးနေတတ်တယ်။ စက်ဘီးတွေက ဈေးကြီးလို့ဈေးချတာကို စောင့်နေရင်း စကိတ်စီး တရက်သင်လိုက်ရလို့စကိတ်ပဲ ဝယ်ရင် ကောင်းမလား လားပေါင်း များစွာနဲ့နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘာမှ မဝယ်ဖြစ်ပါဘူး။ East Coast မှာ စက်ဘီးစီးရတာ တကယ်ကောင်းတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေတလျှောက် စက်ဘီးစီးရင်း ဟိုင်းကြီးကမ်းခြေမှာ ဖေနဲ့ ဆိုင်ကယ်စီး သင်တာကို သတိရမိတယ်။ သဲသောင်မို့ လို့လဲရင် မနာဘူးလေ။ လဲချင်သလောက်လဲပဲ။ သောင်တလျှောက် ဆိုင်ကယ်စီးရတာ East Coast တလျှောက် စက်ဘီးစီးရတာထက် သာတယ်။ မယုံရင် စမ်းကြည့်လိုက်လေ အဟက် အဟက်။ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားထဲကလို စုံတွဲစက်ဘီး စီးဖူးတယ်။ ဘဲဘဲနဲ့ လို့အထင်ကြီးတော် မမူလိုက်ပါနဲ့ ။ မကြီးနဲ့ ။ ရှေ.့ ကနင်းတဲ့သူကတော့ သေရောပဲ။ အကွေ့ တွေနဲ့စက်ဘီးပေါ်တက်ရင် အတော် ဒုက္ခရောက်တယ်။ ကွေ့ ရင် စက်ဘီးက အရှည်ကြီးဆိုတော့ ဒီအတိုင်း ကွေ့ လို့ မရဘူး။ လူက ဆင်းပြီးကွေ့ ရတယ်။ တက်ရင်လည်း ရှေ့ ကလူ အရင်တက်ပြီးမှ နောက်ကလူက တက်ရတယ်။ ဖတ်ဖတ်ကိုမော။ တယောက်ဘီးထက် ပင်ပန်းတယ်။ တို့ အတွက် ပြောတာနော်။ သူများတွေတော့ ဘယ်လိုနေတယ် မသိ။
တယောက်တည်း လမ်းလျှောက်ထွက်ရတိုင်း ရန်ကုန်နဲ့စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ မိသားစု အကြောင်း၊ အချစ် အကြောင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်း၊ လူမူရေး ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ စိတ်ကူးတွေ၊ အတင်းတွေ၊ သတင်းတွေ ဖလှယ်ကြရင်း လျှောက်သွား လျှောက်စားခဲ့ ကြတာကို သတိရတယ်။ အင်းလျားဘေးမှာ၊ ဘုရားပေါ်မှာ၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာ၊ လှည်းတန်းမှာ၊ ဆူးလေမှာ။ စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ဈေးဝယ်ထွက်၊ စားသောက်၊ ပေါက်ကရတွေ ပြော၊ တောင်တွေတက်။ တခါက စိမ့်နဲ့လမ်းလျှောက်တာ boonlay ကနေ lakeside ရောက်ရော။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဒူးတွေညောင်းလို့ ။ Handerson Wave တံတားကနေ vivo city ထိ Mount Faber ကိုဖြတ်ပြီး သာယာလှတယ့် ရှုခင်းတွေကို စိမ့်က မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ အိအိနဲ့ အတူ KentRidge Park ၊Hot Park ၊ Mount Faber အထိ ပန်းခြံ လေးခုဖြတ်ပြီး လျှောက်ဖူးတယ်။ လေးနာရီလောက်ကြာပြီး အိမ်ရောက်တော့ ခြေထောက်တွေ ညောင်းကိုက်နေပေမယ့် ပင်ပန်းရကျိုး နပ်တယ်။ Handerson Wave တံတားနားမရောက်မှီ တောင်နားကို ကပ်ပြီး သံပန်းတွေနဲ့တောင်တက်လမ်းလုပ်ထားတာ တကယ်မိုက်တယ်။ စင်ကာပူကျွန်းက သေးပေမယ့် အပင်တွေ တောင်တောင်တွေ ထိန်းသိမ်းတာ မြန်မာပြည်ထက် သာတယ်။ စင်ကာပူကို စရောက်ရောက်ချင်း လေ ဆိပ်ကနေ အိမ်ကိုအသွား မကြီးက မြန်မာပြည်နဲ့ဘာကွာလဲ မေးတော့ အပင်တွေ ရန်ကုန်ထက် များတယ်။ စန်းထွန်းတင် အဲလို ဖြေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အိအိလည်း ရောက်စက ညဏ်လင်းက ရန်ကုန်နဲ့ဘာကွာလဲမေးတော့ အပင်တွေ များတယ်လို့ဖြေပါသတဲ့။ သန့် ရှင်းသပ်ရပ်တာထက် ထူးခြားတာက အပင်တွေ များတာ။ သူ့ နေရာနဲ့ သူ နေရာတကျ နိမ့်မြှင့်အလိုက် အောက်ခြေကို ခုတ်ထားပြီး မျက်စိပသာဒရဖြစ်ဖွယ် စိုက်ပျိုးထားတာ တကယ့် green city ပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှတော့ နာဂစ်ဖြစ်လို့ဂတုံးဖြစ်နေချိန်ပေါ့။ နာဂစ်မဖြစ်လည်း သစ်ပင်တွေ မရှိတာပါ။ ရန်ကုန်မြို့ ကို စိမ်းလန်းစိုပြည် လှပသော ဥယျာဉ်မြို့ တော် တည်ဆောက်နေတာ ကြာလှပေါ့။ တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းကပဲ။ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်သွားလည်း မပြီးသေးဘူး။ တည်ဆောက်ဆဲ။ အိအိနဲ့ အတူ Bukit Batok, Bukit Timah တောင်တွေ တက်ဖူးတယ်။ နှောက်ခြောက်လလောက်သာ စင်ကာပူမှာ ဆက်နေရရင် စင်ကာပူတကျွန်းလုံး ငါမတက်ဘူးတဲ့ တောင်မရှိဘူးလို့ကြုံးဝါးလို့ ရတယ်။ ခုတော့ ကြုံးဝါးခွင့် မကြုံလိုက်ဘူး အဟက် အဟက်။
မြစ်ဘေးမှာ ငါးမျှားတဲ့သူတွေကို မြင်တော့ ငယ်ငယ်က ဟိုင်းကြီးမှာ ငါးမျှားခဲ့တာကို သတိရမိတယ်။ ငါးမျှားတိုင်း မောင်မောင်က ငါးတွေ အများကြီး မိပေမယ့် စန်းထွန်းကတော့ တကောင်မှ မမိ။ ဂဏ္ဏန်းထောက်ရင်လည်း အစာသာ ဂဏ္ဏန်းစားသွားတယ်။ ဂဏ္ဏန်းကတော့ တကောင်မှ မမိ။ ဝါးကွေးကွေးလေးကို အပေါ်မှာ ငါးအစာတွေကို ချိတ်ထားပြီး အောက်မှာက ပိုက်ကွန် ရှိတယ်။ ဂဏ္ဏန်းက အစာဟပ်နေချိန် ကြိုးလေးကို လှမ်းဆွဲလိုက်ရင် ဂဏ္ဏန်းက ပိုက်ကွန်ပေါ်မှာ ပါလာရော။ အရင်တုန်းက စံပြအိမ်ရှေ့တံတားကနေ ဖေ ကွန်တချက် ပစ်လိုက်ရင် ခက်တဲ့(ပြည်ကြီးငါးကို ဒေသအခေါ်) ၊ ပုဇွန်တွေ အများကြီး ရတယ်။ ဖေ ကွန်ပစ်ရင် မောင်မောင်နဲ့စန်းထွန်းက ဘေးကနေ ဟိုဖက်ကို ပစ်ပါလား ဖေ ဒီဖက်ကို ပစ်ပါလား ဖေနဲ့နှမ်းဖြူးကြသေးတာ။ ပုဇွန်မီးဖုတ်က ကောင်းမှကောင်း။ ခုတော့ ငါးတွေ ရှာပါးလာပြီ။ မလေးရှားမလေး ထိန်ထိန်ကတော့ သူစကားများနေလို့ငါးတွေက နားညီးပြီး အဝေးကိုထွက်သွားလို့ငါးမျှားတဲ့ နေရာမှာ သူရှိနေရင် ငါးတကောင်မှ မရပါဘူးတဲ့။ ငါးတွေတောင် ထွက်ပြေးရအောင် စကားများတာနော်။ နွေဦးကျောင်းပိတ်ရက်မှာ နီပေါသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ နှစ်နာရီလောက် ငါးသွားမျှားတာ ငါးတကောင်ရတယ်။ အဖော်လိုက်တာက ဆယ့်ငါးယောက် ရတာက ငါးတကောင်။
ဒီဒေသမှာ ဘဲနဲ့ လည်းတူ ရေထဲရောက်ရင် ရေကူး ငှက်လိုလည်းပျံတဲ့ ဘဲငှက်တွေ တွေ့ ရတယ်။ ဝေသာလီဗျိုင်းလို့ ပြောတာပဲ။ ငယ်ငယ်က ဘဲငန်းလို့ခေါ်တဲ့ လည်ပင်းရှည်ရှည်တွေကို တယမ်းယမ်း လှုပ်နေတတ်တဲ့ ဖြူဖြူဘဲတွေကို မြင်ဖူးတယ်။ သူ့ နှုတ်သီးနဲ့လိုက်ဆိတ်တတ်လို့အဲဒီအကောင်တွေ အနားလာရင် ပြေးရသေးတယ်။ မှုတ်လိုက်လို့ ရှိရင် အပွင့်တွေ လေကို ပျံ့လွင့်တတ်တဲ့ အလေ့ကျပေါက်တဲ့ ပန်းပွင်.လေးတွေ ရှိတယ်။ လေထဲမှာ အဲဒီအပွင့်တွေ ပျံလွင့်နေတတ်တယ်။ နွေဦးရာသီမှာ အလာဂျီဖြစ်လေ့ ရှိတယ်။ စန်းထွန်းတောင် မဖြစ်ဖူးတယ် မရှိရအောင် ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ တကိုယ်လုံး ယားနေတာ ကုတ်ဖဲ့ရင်း တညလုံး အိပ်မပျော်ဘူး။ ယားပြီးရင်းယား ကုတ်ပြီးရင်း ကုတ်ချင်။ နှုတ်ခမ်းကြီးက ကြီးလာတယ်။ မျက်နှာမှာလည်း အနီအစက်အပြောက်တွေ။ ဆေးခန်းသွားပြတော့လည်း ဘာကြောင့်ဖြစ်ရမှန်း မသိနိုင်ဘူးတဲ့။ ဆပ်ပြာရည် အသစ်၊ ခေါင်းလျှော်ရည် အသစ်၊ လိုးရှင်း အသစ်၊ အစားအသောက် အသစ်၊ ဆေး အသစ် သောက်မိလားတဲ့။ ဘာမှကို အသစ်မသုံးတာပါ။ ဆေးကလည်း ဆရာဝန်က လတ်မှတ်ပါမှ ဝယ်လို့ရတယ်။ စီနီယာ အမနဲ့စကားစပ်ရင်း ပြောမိတော့မှ ပန်းဝတ်မှုန်တွေကြောင့် နွေဦးမှာ အလာဂျီဖြစ်လေ့ ရှိပါသတဲ့။ ဟုတ်သားပဲ အဲဒီတုန်းက နွေဦးလေ။
မေနဲ့စကားပြောရင်း ယားလို့ကုတ်ဖဲ့နေတဲ့ စန်းထွန်းကိုမြင်တော့ မေ့မှာ သနားလို့မျက်ရည်တောင် ကျတယ်။ အရင်တုန်းက မကြီးနဲ့အတူတူဆိုတော့ မေက စိတ်ချတယ်လေ။ ခုတော့ တယောက်တည်း အဝေးမှာ ဆိုတော့ စိတ်ပူရှာတာပေါ့။
အိမ်နားက ကလေးကစားကွင်းမှာ ကလေးတွေနဲ့အပြိုင် ဒန်းစီးလိုက်သေးတယ်။ အမြှင့်ကို မြှောက်မြှောက်သွားပြီး ကောင်းကင်ကြီးနဲ့နီးသွားတယ်လို့ခံစားရသလို ကောင်းကင်မှာ ပျံနေသလို ခံစားရတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက စောင်ပုခက်ကို စီးရတယ်။ မူးပြီး အိပ်ပျော်သွားရော။ နွေကျောင်းပိတ်ရက် ဆိုရင် အိမ်ရှေ့ က အုန်းပင်ကြားထဲမှာ ဆင်ထားတဲ့ ပိုက်ပုခက်ကို လုစီးရတာ။ ပုခက်ပေါ်မှာ အိပ်ပြီး စာအုပ်လေးဖတ် သီချင်းလေး နားထောင် လေတဖြူးဖြူးနဲ့အုန်းရေလေးသောက်လိုက်ရရင် ဇိမ်ပဲ။ Internship ဆင်းတုန်းက ရုံးကနေ Kambengam mrt ထိ အညောင်းအညာပြေအောင် ဘတ်စ်ကား မစီးဘဲ တခါတလေ လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ အဲဒီနားက လုံးချင်းအိမ်တွေနဲ့မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနဲ့တူတယ်။ UFL တက်တုန်းက ကျောင်းဆင်းချိန်ဆို လမ်းလျှောက်နေကြပေါ့။ ရထားက တောင်ကုန်းအောက်ကို ဝင်သွားချိန်မှာ တို့ တွေက ကုန်းပေါ်ကို လျှောက်ရတာပေါ့။ တောင်ကုန်းပေါ် ရောက်ရင် အောက်ဖက်က တိုက်တွေကို စီးကြည့်ရင်း ကောင်းကင်နဲ့နီးသွားသလို ခံစားရတယ်။
ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲက ပင်လယ်ဓားပြလှေကို နောက်ဆုံးတန်းကနေ စီးတုန်းကတော့ ကောင်းကင်နဲ့နီးသွားသလို မခံစားရဘူး ။ ဒူးတွေတုန်ပြီး ရင်ထဲ တလှပ်လှပ် ဖြစ်နေတာ။ မျက်စိမမှိတ်ကြေး ပြိုင်ကြသေးတာ။ Singapore Universal Studio မှာ ရိုလာကိုစတာအပြာကို ရှေ့ ဆုံးတန်းကနေ Jo Jo ၊Jerome ၊ Pierre ၊Winarto နဲ့အပြိုင်စီးတုန်းက ပြောင်းပြန်ဂျွမ်းပစ်သွားတဲ့အချိန်မှတော့ အော်တာ ရိုလာကိုစတာ ရပ်သွားပေမယ့် အော်တာ ရပ်လို့မရသေးဘူး။ တန်အောင် ရိုလာကိုစတာအနီကို ထပ်စီးသေးတယ်။ အပြာလို ရင်မတုန်ဘဲ ခေါင်းမူးသွားလို့ဒယိမ်းဒယိုင်နဲ့အရက်မူးသိုင်းကပြီး ဆင်းလာရတယ်။ ဒါတောင် ပြောလိုက်သေးတယ်။ အနီက အော်တောင် မအော်လိုက်ရဘူး အပြာ ပိုကြိုက်တယ်လို့ ။ Mummy ကတော့ 3D effect တွေနဲ့တကယ်ကောင်းတယ်။ Mummy ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း အကောင်တွေက ကိုယ့်ဆီ တကယ် လာသလို ထင်ရတယ်။ မီးလျှံတွေအကြားဖြတ်သွားတယ်။ နံရံကို ဝင်ဆောင့်တာ နံရံက ကွဲသွားတယ်။ နောက်နေ့ ကျတော့ ရိုလာကိုစတာကို ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မှ လား လား ကြောက်လိုက်တာ။ ရှေ့ ဆုံးတန်းကနေ မကြောက်မရွံ့စီးနေတာ။ ပြုတ်ကျလို့ ကတော့ အရင်ပဲ။ စီးတုန်းက မကြောက်ပေမယ့် ပြီးမှ ကြောက်နေတာ။ ဒါပေမယ့် စင်ကာပူကတော့ စိတ်ချရပါတယ်။ Safety First ကိုး။
လမ်းလျှောက်ရင်း ပြောရတာ ညောင်းသွားလို့(အတော်လည်း ပြောလို့ ဝသွားပြီ) ဒီမှာပဲ ရပ်လိုက်မယ်နော် (ရပ်မှပါပဲ မရပ်များမရပ်ဘဲ ဆက်ပြောနေရင် ဒုက္ခ) အဟက် အဟက်။